दलित आन्दोलनको लय- विचार - कान्तिपुर समाचार
सबैजना लागेको विभेद अन्त्यकै लागि हो । समस्याको हल एउटा मात्रै छैन, अनेक छन् ।
भाद्र २१, २०७५ किरण विक
काठमाडौँ — प्रगतिशील र धेरै समस्याको समाधान दिएको भनिएको ‘नेपालको संविधान’ दलितको सवालमा भने पहिलेभन्दा अनुदार छ । मूलधारको राजनीति समृद्धिको यात्रामा लागेको छ ।
अब राजनीतिक मुद्दा सकियो, सामाजिक मुद्दा कहिल्यै सकिँदैनन्, तिनलाई हल गर्दै जाऔंला भन्दै । ठूला राजनीतिक मुद्दा सकिए पनि दलित सवाल उठानमात्र भएको थियो, उचित बैठान हुनै पाएन ।
२०६२/६३ सालदेखि संविधान जारी हुनु अघिसम्म दलित मुद्दाले अलिकति गति लिएको थियो । यसलाई दलितहरूले सन्तोषजनक उपलब्धि मानेका थिए । अचानक राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो । राजनीतिक दलले यस मुद्दालाई लरतरो तरिकाले समाइरहे, तर मूल मुद्दा अरूलाई नै बनाएर । यसकारण मुद्दा लावारिसजस्तै देखिएको छ । एक समयका दलित आन्दोलनका चर्चित अनुहार ‘दलित मुभमेन्ट बढ्न सकेन’ भन्दै निराशा पोखिरहेका छन् । के अब दलित आन्दोलन सकिएकै हो ?गैरदलित भने दलित मुद्दा आवश्यकताभन्दा बढ्ता चर्को भएको ठान्छन् । दलितहरूले प्रशस्त अवसर लिइसकेको भन्छन् । दलितको अवस्था हिजोको जस्तो नरहेको बताउँछन् ।
सावधानीपूर्वक ‘ह्यान्डल’ गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ, दलित सवाल । दलितहरूले नाम मात्रको देखावटी अवसर पाइरहेका बेलामा पनि गैरदलितले भाग खोसिएको ठान्दै असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरेका छन् ।
हिजो एउटा ठूलो समूहले जानाजान भेदभाव गरेको थियो । आज त्यही समूह नजानी–नबुझी भेदभाव गर्दैछ । दलित आन्दोलनलाई छिटपुट गैरदलितको सहयोग र सद्भाव थियो । अब झन् ठूलो गैरदलित समूहले दलित समस्या सुल्झाउन अपनत्व लियो भनेमात्र यो छिटो सफल हुनेछ । जसरी महिला अधिकारको आन्दोलन पुरुषको ब्यापक समर्थनमा मात्र सफल हुन्छ, त्यसरी नै दलित आन्दोलनले पनि अन्य जातिको समर्थन र सद्भावमा मात्र गति लिन सक्छ । दलितहरू पछि पर्दासम्म समाज पछि पर्छ ।
सबै कुराको फैसला राजनीतिले गर्छ । नेपालमा दलित सवाललाई गति दिने काम भने एनजीओले गरेको छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेझैं एक ठाउँको अन्याय दुनियाँको जुनसुकै कुनाको न्यायको लागि खतरा हो । अहिलेको दलित आन्दोलनमा मूलत: दलितमात्रै छन् ।
प्राज्ञिक र बौद्धिक स्तरमा भने गैरदलितको पनि समर्थन छ । एउटा समय यस्तो थियो, दलितसँंगको सामुहिक भोजन र मन्दिर प्रवेशलाई पनि ठूलो क्रान्तिकारी कदम मानिन्थ्यो । तर त्यतिले पुग्दैन । राजनीतिक नेताहरूको छुट्टै बुझाइ छ । एनजीओकर्मीको छुट्टै । दलित एकेडेमिकहरूको झन् अर्कै । सबैजना लागेको विभेद अन्त्यकै लागि हो । समस्याको हल एउटामात्रै छैन, अनेक छन् । यही एउटा तहसम्मको समान बुझाइ भयो भने आन्दोलनले गति लिन्थ्यो कि ? बुझाइ समान भएपछि एक प्रकारको मोर्चा बन्थ्यो । अनि देखिने धक्का दिन सकिन्थ्यो कि ?
पछिल्लो समय एउटा प्रश्न धेरै सुनिन्छ– दलित समस्या कसको मुद्दा हो ? राजनीतिक दलको कि एनजीओको ? दलहरूले आफ्नो मुद्दा एनजीओले खोसिदिएको भेउ नै पाएनन् भन्ने पनि छन् । एनजीओले धेरै सम्भावनायुक्त राजनीतिज्ञहरू खाइदिए भन्ने आरोप पनि छ ।
एकथरी भन्छन्, एनजीओले दलित मुद्दालाई पातलो बनाइदियो । दलितको नाममा पैसामात्र कमाए । समुदायलाई केही दिएनन् । आफू मात्र बने । यस्तो आरोप बढ्दो छ । दलित भित्रकै ठूलो तप्का एनजीओकर्मीसँंग असन्तुष्ट छ । यो बेलैमा ख्याल गरिएन भने असन्तोष विस्फोट हुनेछ । र दलित आन्दोलन आलोचित हुनेछ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:०२
भाद्र २१, २०७५ हरिहरसिंह राठौर
धादिङ — पृथ्वीराजमार्गस्थित धादिङको गजुरी बजारबाट लागु औषधसहित दुई युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रतिवन्धित लागु औषध लुकाई छिपाई ओसार पसार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले गजुरीबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुंगेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले धादिङको गजुरी–१ गजुरी बजारबाट सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ४० वर्षीय सुवास जिसी र सोही नगरपालिका २ का ३३ वर्षीय रमेश गुरुङलाई लेवल उप्काएको अवस्थाको एक सय एमएल को कोरेक्स थान १८ बोतल र निट्राभाट ट्याबलेट ५१ थानसहित पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुको थप अनुसन्धान जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी धादिङले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:००